uVan Niekerk no-Ismail bayaqhakaza njengoba amaProteas esifazane afinyelela kuma-semi-final endebe yomhlaba
Ukapteni, uDané van Niekerk no-Shabnim Ismail bathathe ama-wicket ayisikhombisa phakathi kwabo, ukuhlela ukunqoba ngama-wicket ayisishagalombili kuma-Momentum Proteas kumdlalo obekumele bawunqobe, umdlalo we-ICC Women’s World Cup bedlala ne-Sri Lanka eCounty Ground eTaunton ngoLwesithathu. Ukunqoba kusho ukuthi i-South Africa izodlala kuma-semi-final omqhudelwano okwesibili. Iqembu ligcina ukufinyelela lapha kwaku-2000 kumqhudelwano.
uVan Niekerk ujabulile ngokuthola lokhu, wathi:
“Yilokhu ebesikusebenzela eminyakeni eminingi futhi ngiyaziqhenya ngeqembu ngomsebenzi abawufakile. Sesikunqobile lokhu futhi singagubha ukuthi sikunqobile lokhu ebesikufuna singena kumqhudelwano futhi kusele umdlalo owodwa.”
“Kusakhona umdlalo ne-Australia okudingeka ukuthi unqotshwe kulesigaba, kodwa sinomqhudelwano omude okusamele sidlule kuwona kanti sizobe sigxile kulokho.”
i-Sri Lanka, engakanqobi lutho kumqhudelwano, iphume yonke ngama-runs angu-101 kubongwa ukapteni we-South Africa ne-Player of the Match ephindayo, othole izibalo ezimangazayo u-4/24 kuma-overs ayisishagalombili, kwathi u-Ismail naye wadlala kahle wathola u-3/14 kuma-overs angu-7.3. i-Sri Lanka ayikwazanga ukuqhudelana nama-Proteas anolaka, uDilani Manodara no-Chamari Polgampola bathole ama-runs angu-25 umuntu emunye emabholeni angu-49 namabhola angu-61 ngaphambi kokuthi baphume.
uSuné Luus, uMarizanne Kapp no-Masabata Klaas, abadlale umdlalo wabo wokuqala wendebe yomhlaba, bathole ama-wicket, u-1/12, u1/13 no-1/17 ngokulandelana kwabo.
AmaProteas aqale umjaho ngokuphuma komdlali onama-runs amaningi eqenjini kumqhudelwano, uLizelle Lee ngebhola lesine le-innings, waphuma ngokunqakwa ngemuva kuphosa u-Sripali Weerakkody (1/22) engakorile. Enye i-wicket kube eka-Trisha Chetty, ophume ngokushaywa kwama-wicket kuphosa ukapteni we-Sri Lanka, u-Inoka Ranaweera (1/20) waphuma eno-13.
Umdlali oneminyaka engu-18, uLaura Wolvaardt (48* off 66) uhole umjaho ngokubekezela kanye nokukhula futhi, eshaya no-Mignon du Preez (38* off 53), basiza iqembu lifinyelele kumphumela kusele amabhola angu-161.
i-South Africa izobe ibheke i-Australia, abazobhekana nabo enkundleni efanayo ngoMgqibelo. Umdlalo uzovezwa ku-SuperSport 8 kusukela ngo-11:15 (SAST). Imiphumela izovezwa ezindaweni zokuxhumana ze-Cricket South Africa; uFacebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
AmaProteas esifazane abheke ukusondela kuma-semi endebe yomhlaba Yonke imidlalo kumele siyinqobe – uDu Preez uBeaumont no-Taylor banqobisa i-England ngokushaya Wonke umuntu usendaweni enhle ngaphambi kwe-England – uChetty Isihluku sika-Van Niekerk no-Kapp bahlanganisa ukunqoba kumaProteas esifazane AmaProteas esifazana agxile kumdlalo wabo uMoreeng unelisekile ngendlela ethathwa iqembu lakhe Umdlalo wamaProteas esifazane kanye ne-New Zealand uyekiwe ngenxa yemvula Siyazi ukuthi kuzomele silethe umdlalo ohamba phambili” – uVan Niekerk AmaProteas esifazane “alungile futhi alindele ukudlala” – Van Niekerk uVillani noPerry bahlanganisa ukunqoba okwanele kuma-Southern Stars